यूसुफ − मिस्रमा एक दास – Word of Truth, Nepal
यूसुफ − मिस्रमा एक दास
यूसुफ बीस चाँदीका टुक्रामा बेचिए (उत्पत्ति ३७:१८)। एक जवान दासको मूल्य त्यति नै थियो (लेवी २७:५ मा हेर्नुहोस्, ५ देखि २० वर्षसम्मको जवान दासको मूल्य; प्रस्थान २१:३२ मा उमेरदार दासको मूल्य; मत्ती २६:१५ मा प्रभु येशूलाई बेचिएको मूल्य)। इश्माएली र मिद्यानीहरू इश्माएल (उत्पत्ति १६:१-२,११) र मिद्यान (उत्पत्ति २५:१-२) का सन्तान थिए। इश्माएल र मिद्यान ____________ का छोराहरू थिए। [न्यायकर्ता ८:२२,२४ हेर्नुहोस्, जहाँ यी दुई शब्दहरू समानन्तर हिसावले प्रयोग गरिएका छन्। यी मानिसहरू शायद सँगै बसोबास गर्थे र आपसमा विवहावारी गर्थे।
यूसुफका दाज्युहरूले उनलाई बेचेर मिस्र पठाए। अब यूसुफका सपनाहरू कहिल्यै पूरा हुनेछैनन् भनी उनीहरूले सोचे (उत्पत्ति ३७:२०)। तर वास्तवमा के भयो- उनीहरूको कारणले गर्दा नै यूसुफका सपनाहरू पूरा भए! यूसुफलाई हटाउन इस्राएलका सन्तानहरू सफल भए, तिनीहरूले उनलाई मिस्रमा बेचेर पठाए। तर, अचम्मको कुरा, यसैद्वारा नै पछिबाट उनीहरूको उद्धार हुनगयो (उत्पत्ति ५०:२०)।
ठिक यसरी नै इस्राएलका सन्तानले ख्रीष्टलाई हटाउन सफल भए, तिनीहरूले उहाँलाई क्रूसमा टाँगे। तर यसैले नै उनीहरूको उद्धारको बाटो तयार भयो! (प्रेरित २:२२-२४,४०; ३:१३-१५,१९,२६; ४:११-१२)!
नवजवान यूसुफले आफूले भोग्नुपरेका यी कुराहरू बुझ्दैनथे। खाडलमा पर्नु उनको प्राणको लागी ठूलो वेदनाको कुरो थियो। उनलाई मानसिक कष्ट र दुःख थियो। कत्रो आपत पर्यो विचरालाई! आफ्नो दाज्युहरूसँग जोडसाथ करूणा र दयाको निम्ति बिन्ती गरे; तर उनीहरूले सुन्दै सुनेनन् (उत्पत्ति ४२:२१)।
यूसुफ दाज्युहरूमाथि उचालिने सपना चक्नाचूर भएजस्तै भयो! उँभो जाने बाटो उँधो हुन्छ (लूका १८:१४; १ पत्रुस ५:६) भनी उनले त्यतिखेर विचार गरेनन् (हामीले पनि प्रायः त्यसरी विचार गर्दैनौं)। राजदरवारमा पग्नुअघि यूसुफ खाडलमा पग्नुपर्ने रहेछ र त्यसपछि अझ एउटा कैदखानामा! यूसुफ मिस्रतर्फ लगिंदा उनी बन्धनमा थिए, अलपत्र थिए, तरैपनि एउटा कुरा पक्का थियो:
प_________ ति_________ हु_________।
यूसुफ र पोतिफर
यूसुफ मिस्रमा ल्याइए र त्यहाँ पोतिफरद्वारा किनिए (उत्पत्ति २९:१)।
उनी १७ वर्षका मात्र थिए। मिस्रमा आफ्नो भन्ने कोही थिएन, उनी एक्लै थिए। घरबाट टाढा थिए, परमेश्वरमा विश्वास गर्ने त्यहाँ कोही थिएन। यूसुफ नौलो देशमा थिए। त्यहाँको भेषभूषा नौलो थियो, चालचलन नौलो थियो। उनी एक्लै थिए, तरै पनि एक्लो थिएनन् कारण परमेश्वर अघिबाट नै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो!
हामी जहाँ भए पनि यो जान्न सक्छौं परमेश्वर त्यहाँ अघिबाट नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई सत्यतामा पुकार्यौं भने (भजनसंग्रह १४५:१८) हामीलाई सहायता गर्नलाई परमेश्वर टाढामा हुनुहुन्न। उहाँमाथि भरोसा गर्दै रहँदा हामी जान्न सक्छौं कि हाम्रा संकष्ट जस्तोसुकै किन नहोस् “यस परिस्थितिमा मसँग प्रभु येशू हुनुहुन्छ; अनि यस परिस्थितिमा प्रभु येशूसँग म छु!”
पोतिफर मिस्रका राजा फाराओका एक ठूला अफिसर थिए। उनी फाराओका सिपाहीहरूका कप्तान थिए। जुन अङ्गरक्षकहरूले मिस्रका राजालाई रक्षा गर्थे, तिनीहरू उनैको जिम्मामा थिए
यूसुफलाई रक्षा गर्ने जिम्मा कसको थियो (उत्पत्ति ३९:२)? ______________। परमप्रभु तिनीसँग हुनुहुन्थ्यो (प्रेरित ७:९)। युसूफ तल मिस्रमा गए र तिनको परमेश्वर त त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो (यूहन्ना १०:४ सित दाँज्नुहोस्)!
तपाईं को सित हुन रोज्नुहुन्छ − मिस्रमा यूसुफको साथमा हुन कि प्रतिज्ञाको देशमा यूसुफका दाज्युहरूसित? यूसुफको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो तर यूसुफको दाज्युहरूको हातमा रगत लागेको लबेदा थियो र उनीहरूको हृदय भने दोषले भरिएको थियो। येशू हामीसित हुनुहुन्छ भने हामी जहाँसुकै पनि जान सक्छौं (यहोशू १:९ दाँज्नुहोस्)।
यूसुफको जीवनको साक्षी र गवाही ज्यादै राम्रो थियो। उत्पत्ति ३९:३ − “___________ उनको _________ हुनहुन्छ” भनी पोतिफरले देखे। पोतिफरले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनथ्यो (१ यूहन्ना ४:१२), तर यूसुफको जीवनमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी उसले देख्न सक्थ्यो।
मानिसहरूले तपाईंलाई हेरिरहेका छन्। के परमेश्वर तपाईंसित हुनुहुन्छ? के तपाईंका साथीहरूले यो देख्न सक्छन्? के तपाईंका शिक्षकहरूले, सकूलकाहरूले वा सहकर्मीहरूले यो जान्दछन्? के तपाईंका बाबुआमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यो देख्न सक्छन्?यदि साँच्चै नै परमेश्वर तपाईंसँग हुनुहुन्छ भने त्यसको के प्रमाण छ?
यूसुफ प्रभुप्रति र आफ्नो मालिकप्रति विश्वासयोग्य थिए। उनले भोलिको निम्ति बढी फिक्री गरेनन् तर आजकै दिनमा आफ्नो काम राम्ररी गर्नलाई उनले ध्यान दिए। “तर पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजी गर, र यी सबै थोकहरू तिमीहरूलाई थपिनेछन्। यसकारण भोलिका निम्ति फिक्री नगर, किनकि भोलिको दिनले आफ्नै थोकहरूका निम्ति फिक्री गर्नेछ। आजको खराबी आजको निम्ति प्रशस्त छ” (मत्ती ६:३३-३४)।
पोतिफरले युसुफलाई सबै कुरामा भरोसा गर्न सक्थे। आफ्नो विश्वासयोग्य दासमाथि उनी पूरै भर पर्न सक्थे। यदि उनीसँग भएका सब थोक यूसुफका हातमा थिए भने (उत्पत्ति ३९:४,६), पोतिफरले आफ्नो कुनै पनि थोकको निम्ति फिक्री गर्नु पर्ने भएन! जबसम्म यूसुफको जिम्मामा सब थोक थिए, पोतिफर ढुक्क बस्न सक्थे। पोतिफरले भरपदो यूसुफमाथि सधैं विश्वास गर्न सक्थे र यूसुफले पोतिफरलाई कहिल्यै धोका दिएनन्। एउटा ठूलो व्यक्तिगत परीक्षा सामना गर्नुपर्दा पनि यूसुफ आफ्नो मालिकप्रति बफादार र इमानदार रहे (३९:८ -९)।
के तपाईंका बाबुआमाले वा तपाईं काम गर्ने ठाउँको मालिकले तपाईंलाई पूरै विश्वास गर्न सक्छन्? तपाईंलाई कुनै जिम्मा दिँदा (घरको कुनै काम, भाइबहिनीको रेखदेख गर्ने जिम्मा, वा तपाईं काम गर्ने ठाउँको कुनै जिम्मा), बाबुआमा फिक्री गर्नुहुन्छ कि ढुक्क बस्नुहुन्छ? के तपाईंले उहाँहरूलाई धोका दिनुहुन्छ कि तपाईं भरपर्दो हुनुहुन्छ भनी निरन्तर प्रमाण दिइरहनुहुन्छ? तपाईंमाथि विश्वास राख्दा तपाईंका बाबुआमा वा मालिक धेरैपटक निराश बन्नुहुन्छ कि? यो याद राख्नुहोस् कि साना कुराहरूमा विश्वासयोग्य भएर नै तपाईंले थप स्वतन्त्रता र सौभाग्यहरू कमाउनुहुनेछ। “जो सबैभन्दा थोरै कुरामा विश्वासयोग्य हुन्छ, त्यो धेरैमा पनि विश्वासयोग्य नै हुन्छ” (लूका १६:१०)।
यूसुफ एक दास मात्र थिएनन्, उनी एक भण्डारी पनि थिए, अर्थात् एक व्यक्ति जसले अर्काको सम्पत्ति र सरसामानको जिम्मा लिन्छ र त्यसको प्रयोगको निम्ति व्यवस्था मिलाउँछ (उत्पत्ति ३९:४-६)। एक भण्डारीको सर्वप्रथम योग्यता के हो (१ कोरिन्थी ४:२; लूका १६:१०)?
के यूसुफसँग यो योग्यता थियो?
एक ख्रीष्टियन भएकोले (यदि तपाईंले साँच्चै मुक्ति पाएको हुनुहुन्छ भने), तपाईं एक भण्डारी हुनुहुन्छ। स्याहार-सम्भार र संचालन गर्नको निम्ति परमेश्वरले तपाईंलाई तपाईंको जिम्मामा के सुम्पनुभएको छ (१ कोरिन्थी ६:१९-२०)? ______________। भण्डारीमा हुनुपर्ने सर्वप्रथम योग्यता के तपाईंसँग छ?
प्रभुले यूसुफलाई फलिफाप गराउनुभयो। परमेश्वरले उसलाई सफल तुल्याउनुभयो (उत्पत्ति ३९:२-३)। प्रभुले यूसुफलाई अचम्म प्रकारले आशिषमय तुल्याउनुभयो। उसले जे छोए पनि त्यो आशिषमय नै हुन्थ्यो! परमेश्वरको आशिष यूसुफमाथि यति प्रशस्त थियो यो आशिष त्यो भरिएर पोतिफर र उनका सबैथोकमाथि पनि खनियो (३९:५)। याकूबमाथि खन्याइएको परमेश्वरको आशिष दाँजेर हेर्नुहोस्, उत्पत्ति ३०:२७)। प्रभुले यूसुफलाई अघि बढाउँदै सफल पार्दै लैजानुभयो र त्यो घरमा (उनको मालिक बाहेक) यूसुफभन्दा ठूलो अरू कोही थिएन (३९:९)।
के प्रभुले तपाईंलाई फलिफाप पार्न र तपाईंको पढाइमा वा काममा सफलता दिन सक्नुहुन्छ? तपाईंमाथि रहेको परमेश्वरको आशिष के अरूमाथि पनि पोखिन सक्छ? सफलता प्राप्तिको इश्वरीय रहस्य के हो (यहोशू १:७-८; भजनसंग्रह १:१-३)-? _____________________________________ ______________________________________ ___________________।
मानविय दृष्टिकोणले हेर्दा, यूसुफमाथि भयानक खराबी आइपर्यो। तिनका दाजुहरूले तिनलाई घृणा गरे, तिनलाई खाडलमा फालिदिए र तिनलाई दासत्वमा बेचिदिए। तिनी घरबाट टाढा लगिए जहाँ तिनको न परिवार न साथीहरू नै थिए। एक जवान ठिटोको निम्ति यी परिस्थितीहरू कठिन थिए, तर परमेश्वर तिनको साथमा हुनुहुन्थ्यो!
कहिल्यै पनि परिस्थितिले तपाईंलाई काबुमा (नियन्त्रणमा) नपारेको होस्। परमप्रभुको डर मान्नुहोस् अनि उहाँलाई नियन्त्रण गर्न दिनुहोस् कि वरिपरि जेसुकै भए तापनि तपाईं शान्तिमा रहन सक्नुहुनेछ। जोसुकै, जहाँसुकै, जेसुकै मेरो वरिपरि बदलिए पनि, मभित्र परमेश्वर र उहाँको राज्य सधैं एकैनास रहनसक्छ। गर्मी वा जाडो, वर्षात् वा घाम, मौसम जस्तैसुकै भएतापनि म एकैनास हुनसक्छु।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 19:37:042020-04-28 14:16:51यूसुफ − मिस्रमा एक दास
२-यूसुफ, उनका दाजुहरूको घृणाको...यूसुफ र पोतिफरकी पत्नी